Netherlands: Qoxootigii Ku Dayacnaa Amsterdam oo uu la Soo Darsay Dhib Hor Leh – fogaanarag
Netherlands: Qoxootigii Ku Dayacnaa Amsterdam oo uu la Soo Darsay Dhib Hor Leh
Magangelyodoonkii ku dayacnaa Magaalada Amsterdam ee xarunta Dalka Netherlands ayaa maanta laga saaray dhismo ay isaga noolaayeen oo ahaan jiray goob gaadiidka la dhigto oo hada aanan la isticmaalin.
Qoxootigaan oo gaaraya 120 qof ayaa in muddo ahba isaga noolaa Magaalada Amsterdam oo hadba gabaad ka dhiganayay dhismayaasha aanan la deganeyn oo laga saaro kadib marka ay muddo ku jiraanba, waxaana maanta si xoog ah looga saaray dhismo aanan hada la deganeyn oo ahaan jirtay meel gaadiidka la dhigto oo aheyd halkii ugu dambeysay ee hada ay ku noolaayen.
Inkastoo ay isku dayeen in aysan ka bixin goobtaasi inta xal looga helayo xaalada haysata ayaa hada waxaa xoog ugu saaray Booliiska Magaalada Amsterdam oo amar ku qabay in ay baneeyaan dhismahaasi.
Gallinkii dambe ee Maanta ayay isugu tageen hoolka bartanka Magaalada iyagoo dalbaday in ay arkaan Duqa Magaalada Amsterdam Eberhard van der Laan, si xal loogu helo dhibaatada haysata oo ay ugu daran tahay gabaad la,aanta la soo gudboonaatay maanta.
Badanka Qoxootigaan ayaa u kala dhashay dalalka Soomaaliya, Congo iyo Yemen, waxaana ay halkaasi ama Amsterdam ay joogeen oo ay ku dayacnaayeen tan iyo 2012 kadib markii wasaaradda cadaalada qeybteeda sharci bixinta IND ay diiday dacwadoodii magangelyodoon kadibna ay banaanka ugu soo saartay xeryaha magangelyodoonta Dalka.
Halkaan ka Daawo Muuqaalada Warkaan